Archdiocese of Mandalay blog: အမျိုးသမီးဖြစ်ရခြင်း၌ . . .။
အမျိုးသမီးဖြစ်ရခြင်း၌ . . .။
Luciano Cian မှ God's Plan misunderstood (ဘုရားအစီအစဉ်ကို တလွဲနားလည်ခြင်း) ဟူသည့်ခေါင်းစဉ် နှင့် ဤသို့ ရေးသား ထားသည်။ "ပုံသေနည်း အရ ခင်ပွန်းနှင့်ဇနီး တူညီသောအဆင့် ဂုဏ်သိက္ခာရှိသည်။ သို့သော် လက်တွေ့တွင်မူ ဇနီး (အမျိုးသမီး)သည် ပိုနိမ့်သောအဆင့်၌ ရှိသည်၊ ဘုရားသခင်၏ မူလအစီအမံ ဖြစ်သော အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသားကြားတွင် တန်းတူ ညီမျှရေးသည် ဓမ္မဟောင်းခေတ် ဂျူးလူမျိုးများက သွေဖယ်သွားစေခဲ့ကြသည်။ ၄င်းကို ဓမ္မသစ်ခေတ်တွင် သခင်ယေဇူးက ပြန်လည်ချမှတ် ပေးခဲ့ရသည်။ ကမ္ဘာဦးကျမ်းတွင် (မ)နှင့်(ကျား)တန်း တူညီ ဂုဏ်ရည်ရှိမှုကို တင်ပြထားပေသည်။ ဖန်ဆင်းရှင်၏ အလိုတော်မှာ ဂုဏ်ရည်တူ လူအမျိုးအစား နှစ်မျိုးတို့ အချင်းချင်း အကူအညီဖြစ်စေ၊ အပြန်အလှန် ဖြည့်စွက်ကြစေ အလို့ငှါသာ ရည်ရွယ်ခဲ့သည်။" (ကမ္ဘာဦး ၂း၂၃)။
"အမျိုးသမီးနှင့် အမျိုးသား၏ လုပ်ဆောင်ရန် တာဝန် အခန်းကဏ္ဍ မတူညီကွဲပြားသည် မှန်ပါ၏။ သို့သော် လူပုဂ္ဂိုလ် တန်ဖိုးချင်းမူကား တန်းတူရည်သာ ဖြစ်ကြပါသည်။ အမျိုးသားက အမျိုးသမီးအပေါ် မတရားအထက်စီးမှ အနိုင်ယူသည် ဟုပြောရန်မှာ ၀မ်းနည်းဖွယ်၊ ရှက်ဖွယ်ဖြစ်၏။ သခင်ခရစ်တော်သည် ဖန်ဆင်းခြင်း အစကတည်းက ထားရှိရည်ရွယ်သော အမျိူးသမီးတို့ ဂုဏ် သိက္ခာကိုပြန်လည် ထူမြောက်ပေးရန် ကြွလာခဲ့ပေသည်။" ဟူ၍လည်း Woman:aperson uniquely creative စာအုပ်တွင်ရေးသားထားပါသည်။
လူတွင် အဆင့်အတန်း၊ အမျိုးအမည်၊ အသင်းအဖွဲ့၊ မြေနေရာဒေသ စသဖြင့် ခွဲခြားခြင်းကို ၀ါသနာပါသည့် စရိုက်ရှိနေပေသည်။ ခွဲခြားမှု အမျိုးမျိုးထဲမှ အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသား (အမ၊အဖို) ခွဲခြားမှုတစ်ခုကလည်း အခိုင်အမာ အမြစ် တွယ်နေသည်ကို တွေ့ရမည်ဖြစ်သကဲ့သို့ ကျွန်မတို့နေထိုင်သော လောကကို အမျိုးသား (အဖို) ကြီးစိုးလျက်ရှိကြောင်း ထင်ရှားပေသည်။ အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသား နှစ်မျိုးလုံးပါဝင်သော ကိစ္စတစ်ခုခု တင်ပြရန် ရှိလျှင်ထိပ်မှ၊ ရှေ့မှ အမျိုးသားအမည်များ အစီအရီ ရေးသားပြီးမှသာ နောက်မှ အမျိုးသမီးအမည်များ ရေးလေ့ ရှိကြသည်။ အသေးဆုံး ဥပမာအဖြစ် - သီချင်းခွေ၊ စီဒီဖုံးပေါ်မှ အဆိုတော်များ အမည်စာရင်းကိုသာ ကြည့်ပါ။
ဤသည်မှာ ရှေးပဝေသဏီမှ မြစ်ဖျားခံလာသော အယူအဆဖြစ်၍ မည်သူ့ကိုမျှ တရားခံစစ် ရှာမရနိုင်သကဲ့သို့ အပြစ်ပုံချရမည့်သူလည်း တွေ့မည်မဟုတ်ပါ။ အမျိုးသားက မြတ်သည်၊ မြင့်သည် ဟူသည့်အယူကို အမျိုးသမီးများ ကိုယ်တိုင်ကပင် ကျေကျေနပ်နပ် လက်ခံနေကြပေသည်။ အမျိုးသား၏ မြင့်ခြင်း၊ မြတ်ခြင်း အယူအစွဲသည် မည်မျှထိ ခရီးရောက်သွား သနည်းဟူမူ မိမိကိုးကွယ်သည့် ဘုရား နှင့်ပင် နှိုင်းယှဉ်၊ တိုင်းတာသည် အထိဖြစ်သွားရသည်။ အဖိုမဟုတ်၊ အမ မဟုတ် ခန္ဓာကာယလည်း မရှိ၊ ၀ိညာဉ်သက်သက်ဖြစ်သော ဘုရားကို ပင်အမျိုးသား (အဖို) အဖြစ်သာ မြင်ယောင်တင်စား လက်ခံထားကြလေသည်။
ဤအချက်နှင့် ဆက်စပ်၍ "အာရှအမျိုးသမီး အသင်းတော် (နျွှဗ)" ဒုတိယအကြိမ် အစည်းအဝေး (အင်ဒိုနီးရှား) တွင် ၂၀၀၄-ခုနှစ်က သွားရောက် ပါဝင်ဆွေးနွေးခဲ့သော Sr. Ann Shwe, SJA၏ ရှင်းလင်း ကိုးကားချက်များမှ တစ်ချက် ထုတ်နှုတ်ဝေမျှလိုသည်မှာ "ဖန်ဆင်းရှင်ဘုရားကို ဖြူသောဝတ်ရုံတော် ၀တ်ဆင်ထားလျက် မုတ်ဆိတ်ရှည်ကြီးနှင့် (ယောက်ကျားသား) အဖိုးကြီး၏ ပုံရိပ်မျိုး မြင်ယောင်တတ်ခြင်းကို မေ့ဖျောက် ပစ်ကြပါစို့။ ဘုရားကို မည်သူမျှ မမြင်စဖူးပါ၊ အမျိုးသားပန်းချီ၊ ပန်းပုဆရားများက ရေးဆွဲထုလုပ်သည့် ဘုရားပုံတော်များကိုသာ မျက်စိ ယဉ်နေခဲ့ကြသည်။ စွဲထင်နေ ခဲ့ကြပေသည်။ အကယ်၍ တစ်စုံတစ်ယောက်မှ ဘုရားကို ဤသို့ အမျိုးသားဟန် သဏ္ဍန်ဖြင့် ရူပါရုံ မြင်ရပါသည် ဆိုလျှင်ပင် ၄င်းသည် ကာလံ၊ ဒေသံနှင့် အခြေအနေတစ်ခု၏ သီးခြားလိုအပ်မှု အတွက်သာ ဖြစ်ပါလိမ့်မည်။ (အမ၊ အဖို) ခပ်သိမ်းကို အသက်ပေးသွင်း သူ၊ လိင်မဲ့၊ ခန္ဓာမဲ့ ၀ိညာဉ်သက်သက်ဖြစ်သော ဖန်ဆင်းရှင်ဘုရားကို ကျမ်းစာမှလည်း ဘုရားသခင်သည် (အဖို) ဖြစ်တော်မူ၏။ သို့မဟုတ် (အမ) ဖြစ်တော်မူ၏ ဟုဖေါ်ပြခြင်းထက်၊ ဘုရားသခင်သည် ချစ်ခြင်းမေတ္တာ ဖြစ်တော်မူ၏ (၁ ယော ၁း၁၆ ) ဟူသာ တွေ့ရမည်ဖြစ်သည်။
ဘုရားသခင်သည် လူကိုဖန်ဆင်း ကတည်းက "ငါတို့နှင့်တညီ၊ တစ်သဏ္ဍန်တည်း လူကို ဖန်ဆင်းကြစို့" ဟု သာ ပြောခဲ့ပါသည်။ "လူတန်းစား နှစ်မျိုးကို ဖန်ဆင်းကြစို့" ဟုမပြောပါ။ (ကမ္ဘာဦးကျမ်း ၁၆း၇၈) က ဟာဂရ အမည်ရှိသော ကျွန်မတစ်ယောက်ကို ကောင်းကင်တမန် ကမေးသည့် "ဘယ်က လာပြီး၊ ဘယ်ကိုသွားမှာလဲ" ဤမေးခွန်းသည် အမျိုးသမီးတိုင်း မိမိ ကိုယ်ကို ပြန်မေးရမည့် မေးခွန်းပင် ဖြစ်ပါသည်။ ၄င်းမေးခွန်းကိုဖြေရန် ကျွန်မတို့ ငယ်ငယ်က ဘုရားစကား၌ သင်ခဲ့ရသော အမေး၊ အဖြေတစ်ခုက အကျုံးဝင်နေပါသည်။ "ဘုရားသခင်က လူကို ဘာအတွက် ဖန်ဆင်းတာလဲ" "သူ့ကိုသိဖို့၊ သူ့ကိုချစ်ဖို့၊ သူ့ကိုအစေခံဖို့နဲ့ နောင်ဘ၀ကျရင် သူနဲ့အတူထာဝရ ပျော်ရွှင်မှုကို ခံစားရစေဖို့" ဟူ၏။ သို့ဖြစ်လျှင် ဘုရားထံမှ လာကာ ဘုရားထံသို့ ပြန်သွားရမည့် အမျိုးသမီး၏ အရည်အသွေးကိုပို၍ ညံ့ဖျင်းသော လူသားတစ်မျိုးအဖြစ် ဖန်ဆင်းထား ပါမည်လော။ အမျိုးသမီး (အမ) ဖြစ်စေ၊ အမျိုးသား (အဖို) ဖြစ်စေ သူ၏ ဖန်ဆင်းရှင်ဖြစ်သော ဘုရားနှင့်တလုံး တ၀တည်း ဖြစ်စေရန်သာ ဖန်ဆင်းထားပါသည်။ ၀ိညာဉ် သက်သက်ဖြစ်သော အဖိုလည်းမဟုတ်၊ အမလည်း မဟုတ်သော၊ အနန္တ မေတ္တာရှင်သည် ချစ်ခြင်းမေတ္တာဖြစ်သောကြောင့် ထိုဘုရားသည် လူကိုအညံ့၊ အကောင်း ခွဲခြားပါမည်လော။
ထို့ကြောင့် အမျိုးသမီး ဖြစ်နေခြင်းကြောင့် တစ်ဆင့်နိမ့်၊ ဒုတိယတန်းစား၊ အရည်အသွေး ညံ့ဘ၀ရှင်ပါ ဟူသည့် အယူအဆကို ခေါင်းထဲမှ ထုတ်ပစ်ကြပါစို့။" ဤသို့ဆိုထားသည်။
သင်သည် အမျိုးသမီးတစ်ဦး ဖြစ်ပါက သင့်ကိုယ်သင် ကောမည်သို့ ခံယူထားပါသလဲ။ ဘာသာရေး၌၊ လူမှုရေး၌ သင့်မိသားစုအတွင်း၌ကော သင့်ကိုယ်သင် မည်သည့် နေရာ၌ ထားပါသလဲ။ မည်သည့် နေရာ၌ နေရပါသလဲ။
- What is your image of God ?
- What is your Female image of God? By (Sr. Ann Shwe , SJA)
- Woman:aperson uniquely creative. By (Luciano Cian)
- In God's image ( Vol-19, No-2, June 2002
- Gathering the voices of the silenced (EWA)
Posted by Archdiocese Of Mandalay Blog at 12:24 AM
"အသင်းတော်" မှ "သာသနာ"သို့ (သို့မဟုတ်) ဆန္ဒတစ်ခု
ဘုရင်ဂျီ (သို့) စာနီ